अध्ययन गर्न विदेश गएका ५ सय कर्मचारी बेपत्ता ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अध्ययन गर्न विदेश गएका ५ सय कर्मचारी बेपत्ता !
काठमाडौं । सरकारी सुविधामा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर अध्ययनका लागि विदेश गएका निजामती कर्मचारी अध्ययन सकेपछि उत्तै वेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
सरकारी ऐन नियमको ठाडो उल्लंघन गरी विदेश गएका पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी उत्तै वेपत्ता भएका छन् । त्यसरी वेपत्ता हुने कर्मचारीको खोजी गरी उनीहरुलाई कारबाही गर्न सरकार असफल भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न गई उतै वेपत्ता भएका सरकारी कर्मचारीको संख्या पाँस सयभन्दा बढी रहेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नर्वेलगायतका युरोपियन देश, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानमा अध्ययनका लागि जने कर्मचारी अध्ध्यन सकेपछि नेपाल र्फकनुको साटो उतै बस्ने गरेका छन् । विशेषगरी कृषि, बन र सिँचाइ मन्त्रालयका प्राविधिकहरु वेपत्ता हुने गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।